Famaritana raha toa ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray no mety amin'ny orinasanao BY RICK LEBLANC
Ity no lahatsoratra fahatelo sy farany amin'ny andiany telo. Ny lahatsoratra voalohany dia namaritra ny fonosana fitaterana azo ampiasaina sy ny anjara toerany amin'ny rojom-pamolavolana, ny lahatsoratra faharoa dia nanisy tsipiriany momba ny tombony ara-toekarena sy ara-tontolo iainana amin'ny trans azo ampiasaina ...
Ity no lahatsoratra faharoa amin'ny andian-dahatsoratra telo nataon'i Jerry Welcome, filohan'ny Fikambanana Reusable Packaging Association. Ity lahatsoratra voalohany ity dia namaritra ny fonosana fitaterana azo ampiasaina sy ny anjara toerany amin'ny rojom-panomezana. Ity lahatsoratra faharoa ity dia miresaka momba ny toekarena sy ny tontolo iainana ...
Ity no lahatsoratra voalohany amin'ny andian-dahatsoratra misy fizarana telo nataon'i Jerry Welcome, izay filohan'ny Fikambanana Reusable Packaging Association. Ity lahatsoratra voalohany ity dia mamaritra ny fonosana fitaterana azo ampiasaina sy ny anjara andraikiny amin'ny rojom-panomezana. Ny lahatsoratra faharoa dia hiresaka momba ny toekarena sy ny ...
Fa maninona no ilaina ilay servieta vita amin'ny landihazo?
Ny lamba famaohana tarehy azo esorina dia vokatra fanadiovana fanary, vita amin'ny fibre landihazo, malefaka malefaka, henjana ary tsy misy loko. Ny fomba fampiasana dia isan-karazany, toy ny fanasana tarehy, fanasana tarehy, fanesorana makiazy, fikosehana sns. Misy vokany madio sy madio. Tarehimarika azo esorina ...
Inona no mampiavaka ny fonon'ny kodiarana vita amin'ny tabilao sela pp?
Izahay Lonovae dia manana tsipika famokarana roa hisintonana ny tantely. Ny habetsahan'ny isan'andro dia mety hatramin'ny 16-17 taonina. Ary ny antony isafidianantsika ny takelaka tantely pp fa tsy ny karatra hafa na ny hollow panels dia ny kalitao tsara sy ny fampisehoana ...
Fa maninona no mihabetsaka ny mpanamboatra fiara mifidy boaty PP Cellular?
Fa maninona no mihabetsaka ny mpanamboatra fiara mifidy boaty PP Cellular? Ny boaty plastika plastika dia karazana boaty vita amin'ny fonon-tànan'ny pp, fonosana vita amin'ny tsindrona ary paleta. Ny boaty dia vita tamin'ny hazo tamin'ny voalohany. Ary mihamaro hatrany ny vokatra vokarin'ny orinasa pl ...